कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएका सबैको परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिसकेका छौं : डा. पाण्डे – newslinesnepal
कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएका सबैको परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिसकेका छौं : डा. पाण्डे
प्रकाशित मिति : ६ चैत्र २०७६, बिहीबार १७:४८
काठमाडौं, ६ चैत्र । इपिडिमियोलोजी तथा नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. बासुदेव पाण्डेले कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन नदिन सबै किसिमका रोकथामका उपाय अपनाइसकिएको बताएका छन् ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा उनले देशभरका अस्पतालमा निमोनियाका विरामीको सूची तयार गरी परीक्षण समेत भइरहेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘हामी सूची लिएर कसैलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ कि भनेर खोजीसमेत गरिरहेका छौं । संक्रमणको लक्षण देखिएका जो कसैको परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिसकेका छौं ।’